Golaha Wasiiradda Puntland oo ansixiyay xeerka macdanta iyo shidaalka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGolaha Wasiiradda Puntland oo ansixiyay xeerka macdanta iyo shidaalka
August 23, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Golaha Wasiiradda Puntland kulankoodii August 23, 2018. [Xigashada Sawirka: Xafiiska Madaxtooyada]
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda ayaa ansixiyay xeerka macdanta iyo shidaalka kadib kulankooda asbuuclaha oo maanta oo Khamiis ah ay ku yeesheen magaalada Garoowe, ee caasimada.
“Xeerka macdanta iyo shidaalka ayaa qeexaya iswaafajinta maalgashiga iyo shuruucda dalka, ilaalinta deegaanka iyo ka faa`ideysiga kheyraadka dihin.” Ayaa lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyada.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddoomiye ku xigeenka labaad ee dowladda federaalka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay in mooshinka laga soo gudbiyay guddoomiyaha baarlamaanka uu xiriir la leeyahay arrinta DP World. Cawad ayaa sheegay in baarlamaanka Soomaaliya [...]
Madaxweynihii hore ee Puntland oo dad weynaha Puntland ugu baaqay in ay taageeraan mashaariicda horumarineed ee ka socda gudaha gobolada
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa dad weynaha reer Puntland ugu baaqay in ay taageeraan mashaariicda horumarineed ee ka socda gudaha gobolada Puntland. Faroole oo shir jaraaid ku qabtay maanta [...]